Nagarik News - समस्यामा अल्झिएको प्रेम
आइतबार २२ बैशाख, २०७०
सुयशको जीवनमा मायाको घाम लाग्न–लाग्न खोज्थ्यो, अनि कालो बादल आएर ढपक्क छोपिहाल्दथ्यो। पर्सन्यालिटी त उसको पनि छ्या भन्ने खालको थिएन। रामेश जस्तो हंकी नभए पनि औसत केटाहरूभन्दा अलि माथि नै थियो ऊ। एट्टिच्युड प्रोब्लेम भने खुब थियो उसमा। साथीभाइसँग हिँड्दा बढी नै पोज मार्ने
बानी थियो उसको। कानमा इयरफोन छुट्दैनथ्यो। गीतको सोखिन थियो ऊ। पुराना हिन्दी गीतमा निकै रमाउँथ्यो। महिनैपिच्छे मोबाइल फेर्ने सोख थियो उसको। कान्तिपुर शहरमा भर्खर–भर्खर ब्लुटुथ आएको बेला उसले पनि त्यो यन्त्र कानमा लगाएको थियो। अमेरिकाबाट देश घुम्न आएका उसका काकाले 'के भिरेको त्यो कानमा? अमेरिकामा त लेबर काम गर्नेले मात्रै भिर्छन् यस्तो त!' भनेपछि उसले कानबाट ब्लुटुथ झिकेर थन्क्याइदिएको थियो।
सुयशले मन पराएका केटीहरूमा किमिला पहिली थिइन। अघिल्लो न्यू इयर्स इभसम्म ऊ हेलेनाको पछि लागेको थियो। हेलेना फास्ट थिई– स्टडीमा पनि र लाइफ स्टाइलमा पनि। सुयशभन्दा अलि म्याचोर्ड देखिन्थी। उमेरकै हिसाबले त ऊ छिप्पिइसकेकी थिई। उसको यौवनलाई धानेको थियो मेकअपले। हेलेनालाई रिझाउन सुयशले निकै मेहनत गरेको थियो। उसका लागि ड्रेसअपदेखि कस्मेटिक्ससम्म सुयशले नै धानेको थियो। उनीहरू सँगै रेस्टुराँजान्थे र भोड्का तान्ने गर्थे। भोड्का चढ्न थालेपछि हेलेना सुयशको कपाल सुमसुम्याउँथी र भन्थी, 'ओ माई ह्यान्डसम लभ्ली क्याट! ओ माई बेबी!' यत्तिमै मख्ख पर्थ्यो सुयश। एक साँझ भोडका पिउँदै गर्दा यस्तो भयो कि हेलेनाले सुयशसँग आउटिङको प्रस्ताव राखी। सुयश दंग पर्‍यो। उनीहरू साँझ झमक्क परेपछि बाइकमा लागे धुलिखेलतिर। शहरमा मापसे आतंक फैलिएको थिएन। दिन पातलिँदै थियो। सुयशको अनुहार हेलमेटमा लुकेको थियो भने हेलेनाले स्कार्फलाई मास्क बनाएकी थिई। पहिचानको खतराबाट उनीहरू मुक्त थिए।
यो आउटिङपछि सुयश र हेलेनाको दोस्ती अचानक नै पातलियो। हेलेना टाढिन थाली सुयशसँग। सुयश आफैँ पनि तर्किनथाल्यो हेलेनासँग। जाडो छल्न सुयशका मम्मी–पापा मधेस झरेपछि ऊ मालतीतिर तानियो। मालती सुयशको घरमा थिई, बितेका तीन वर्षदेखि। घरमा उसको हैसियत डोमेस्टिक हेल्परको भन्दा माथि र सुयशको भन्दा तल थियो। हेलेनाजस्तै मालती पनि अलिकति म्याचोर्ड देखिन्थी। मम्मी–पापा हिँडेको दोस्रो दिन साँझ सुयशले मालतीसँग आँखा जुधाउँदै भन्यो, 'चम्पी गर्देऊ न।' मालती मख्ख परी। उसले सुयशको कोठाबाट हेयर अइल लिएर आई र उसको तालुमा तेल ठोक्न थाली। सुयशको पूरै शरीर सेन्सेटाइज्ड भयो। मालतीले पनि रमाइलो अनुभव गरेकी थिई।
सुयशको यो सम्बन्ध पनि तीनचार दिनमै पातलियो। अकस्मात् नै मालती ऊसँग तर्किन थाली। विन्टर भ्याकेसन सुरु भएपछि मालती घरतिर लागी र सुयश पनि मधेसतिर लाग्यो। कलेज खुलेपछि फर्केको सुयशले धेरै कुरा बदलिएको पायो। उसको बेस्ट फ्रेन्ड निरूप र सुमनले कलेज छाडेका थिए। हेलेना फुड टेक्नोलोजी पढ्न स्कलरसिप पाएर फिलिपिन्सतिर लागेकी थिई। नयाँभर्नामा आएका कोही पनि त्यति फास्ट–फरवार्ड थिएनन्। सुयश निकै डल फिल गरिरहेको थियो।
सुयशको मन किमिलामा बसे पनि किमिलाको आँखामा कतै चढेको थिएन सुयश। लाइफस्टाइलका कारणले मात्रै हैन, विचारले पनि उदार थिई किमिला। सुयश धन–पैसाले सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्थ्यो। यो हल्काफुल्का जमानामा पनि घाँटीमा सुनको मोटो सिक्री, हातमा सुुनको ब्रासलेट, आँखामा पोलो गग्स– सुयशको व्यक्तित्व भद्दा देखिन्थ्यो। ऊ भने यसैलाई सौन्दर्य ठान्थ्यो। उसको पुर्ख्यौली त्यति सम्पन्न होइन। मधेसमा चारपाँच बिघा जग्गा हुँदैमा मानिस सम्पन्न पनि त हुँदैन। वास्तवमा सुयश नवधनाढ्य परिवारको प्रतिनिधि पात्र थियो। उसको पापा जिल्लामा सानोतिनो ठेकेदारीको काम गर्दागर्दै ठूला ठेकेदार बनेका थिए। पैसा कमाएपछि मान्छेमा अहंकार त चढ्ने नै भो!
सबैसँग बोल्ने, खाने, रमाइलो गर्ने चुलबुले स्वभावकी किमिलाले सुयशसँग चिनजान भएकै दिन मुख बटारेकी थिई। सुयशको घाँटीमा लर्केको सुनको मोटो सिक्री देख्नेबित्तिकै उसको पारा चढेको थियो। साँझ क्याफेमा साथीहरूसँग उसले सुयशको सिक्रीलाई जोक बनाउँदै भनेकी थिई, 'सुनको दाम्लोले बाँध्दैमा भैँसी कहिले मान्छे हुने हो र?' सुयशलाई साँच्चीकै जोक बनाउने विचार गरेर किमिलाको ग्रुपले भोलिपल्ट सुयशलाई क्याफेमा बोलायो। सुयश मख्ख पर्दै क्याफे पुग्यो। मेचमा राम्रोसँग बस्नसम्म पनि नबसी निकै बडप्पन देखाउँदै उसले अनाउन्स गर्‍यो, 'आज मेरो टि्रट।'
केटीहरूले उसको बडप्पन मन पराएनन्। इसारा–इसारामै कुरा भयो उनीहरूबीच। केटीहरूले विभिन्न खानेकुराको अर्डर गरे। सबै खाइसक्ने कुरै थिएन। त्यसपछि कफीको पालो आयो। केटीहरूले कोल्ड क्यापचिनो मगाए, सुयशले एस्प्रेसो। वेटरले उसका अगाडि सानो कपमा एक घुट्को कफी ल्याएर राखिदियो। उसले त्यो कफी पिएको मात्र के थियो, तीतो न तीतो स्वादले रन्थनियो। सधँै रामचाको चियापसलमा मेसिनले गरर्र पारेको दुधिलो र गुलियो इन्स्ट्यान्ट एस्प्रेसो कफी पिइरहेको केटोले के धान्न सक्थ्यो एस्प्रेसो! सुयशले मुख बिगारेको देखेर केटीहरू खित्का छाडेर हाँस्न थाले। आठ हजार रुपैयाँको बिल तिरेर आफू दोहोरो बेबकुफ बनेको उसले बुझ्नै सकेन।
किमिलाको इन्ट्रेस्ट आफूमा नभएको सुयशले बुझ्नै सकेको थिएन। प्रायःजसो ऊ किमिलालाई टि्रट दिन्थ्यो। किमिला पनि फोेगटको खाना छाड्दैनथी। रामेश र किमिलाका बीचको प्रेम भाव देखेपछि उसको मनमा चिसो पसेको थियो। उसले आफ्नो भाग्यमा गर्लफ्रेन्ड नै नभएको सोच्न थालेको थियो। यथार्थ पनि त्यस्तै थियो। ऊसँग दुई घण्टा बिताउने केटीहरू पर–पर–पर भैहाल्थे।
उमेर पुगेका किशोरकिशोरी, तरुणतरुणीका लागि विवाहपछिको पहिलो रात र पहिलो सम्भोगको कल्पना सुखद र आशंकापूर्ण दुवै हुन्छ। यसबारेमा वयस्क स्त्रीपुरुषका साथीसंगिनीसँग पहिलेदेखि स्वाभाविक चर्चा–परिचर्चा पनि भइरहन्छ। तर, पहिलो सम्भोग र...
विवाह नगरे पनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्का 'जोडी'कै रूपमा चिनिन्छन्। फिल्मदेखि व्यवसायसम्म सहकार्य गरिरहेका उनीहरूले सम्बन्धलाई औपचारिकता मात्रै दिन बाँकी रहेको बताइन्छ। शनिवार एक कार्यक्रममा यो जोडी सँगै देखियो।...
एमाले नेता केपी ओलीको बोली गोली चलेजस्तै चल्छ। उनले उखानटुक्काबाटै व्यंग्य कसेर धेरैलाई र्यालखर्यानखती पारेका छन्। उनका राजनीतिक दाउपेच र यस्तो बोलीले धेरैलाई सताएका छन्। उनलाई चाहिँ कसले सताएको होला?...